15 Easy Halloween yezandla For Kids | Imisebenzi yezandla ivuliwe
15 Halloween yezandla for Kids
Elizabeth Catalan | 20/10/2021 10:00 | Ubuciko be-Halloween, Izikhathi ezikhethekile
I-Halloween iyeza! Omunye wemikhosi ethandwa kakhulu yizingane ngoba kuyisikhathi esihle kakhulu sokugqoka njengabalingiswa babo abathandayo, ukudlala imidlalo yokwethusa nokuqoqa uswidi omningi ezindlini ezisendaweni.
Kodwa-ke, uma unomsebenzi wokuzilibazisa wobuciko, leli holide futhi liyisikhathi esihle sokuba uthuthukise umcabango wakho nobuciko. Kulokhu okuthunyelwe ngethula okuningana Ubuciko be-Halloween bezingane ukuze abancane babe nokuqhuma kulo Okthoba. Kusuka kumandi, amabhukhimakhi nezimbali zezimbali kuya kwimidwebo nezilo ezahlukahlukene ongadlala ngazo. Ungaphuthelwa!
1 Ungayisonga kanjani uswidi nge-Halloween
2 Monster pack ukunikeza uswidi on Halloween
3 Izintandokazi ezihle ze-lolly ze-Halloween
4 Umama wamakhadibhodi amnyama we-Halloween
5 Ubuciko be-Halloween bezingane. Umdwebo womthakathi
6 Ungayenza kanjani uswidi we-Halloween omile ghost
7 Ungayenza kanjani ikati elimnyama le-Halloween
8 I-Halloween garland yokwenza nezingane
9 Amabhukumaka wenjoloba womthakathi we-Halloween
10 Izingebhezi zaseMexico ukugubha uSuku Lwabafileyo noma i-Halloween
11 I-DIY Halloween bat
12 Izipoki zephepha ukuhlobisa iphathi yakho ye-Halloween
13 Ikhadi lezingane lezilo ukugubha i-Halloween
14 Ama-coasters wamehlo anegazi ukuhlobisa i-Halloween
15 Iphosta «BOO» ye-Halloween
Ungayisonga kanjani uswidi nge-Halloween
Abancane bathanda amaswidi futhi ukugubha iphathi yalolu hlobo, amaswidi awasoze alahleka. Kujwayelekile nge-Halloween ukuthi izingane zingene indlu ngendlu zicela amaswidi zisho umusho odumile othi "iqhinga noma ukwelapha".
Uma ulinda emnyango wakho izingane ezifihlekile zicela amaswidi noma uzogubha iphathi ekhaya nezingane, lo mkhakha uzoba wusizo olukhulu futhi ungenye Ubuciko be-Halloween bezingane kulula ukuyilungisa.
Uzodinga kuphela amaswidi ambalwa, omaka, iphepha lokugoqa, izikele kanye ne-glue. Uma ufuna ukufunda ukuthi ungakwenza kanjani, ungaphuthelwa okuthunyelwe Ungayisonga kanjani uswidi nge-Halloween.
Enye indlela yokupakisha amaswidi azosatshalaliswa ephathini le-Halloween lokhu okuhle iphakethe lesilo esincane. Izingane zizoyithanda! Ikakhulukazi uma bezijabulisa ngokulungisa lezi zindwangu bese bezisabalalisa phakathi kwezivakashi ezisemcimbini, noma ngabe zikhona ezinye izingane noma abantu abadala. Akekho umuntu obaba uswidi!
Izinto zokwakha ezimbalwa zizokwanela ukwenza leli phakethe le-monster candy, futhi kungenzeka ukuthi usuvele uneziningi zazo ekhaya: ibhokisi elivela ephepheni lendlu yangasese, amakhadi anemibala, amehlo ezobuciko, isibhamu seglue esishisayo, kanye nesikele. Ngenye yezandla ezilula futhi ezimnandi kakhulu ze-Halloween zezingane ezingazilungiselela ekhaya noma esikoleni. Thola imiyalo kokuthunyelwe Monster pack ukunikeza uswidi on Halloween.
Izintandokazi ezihle ze-lolly ze-Halloween
Lokhu kungenye yezinto zobuciko ezilula kakhulu ze-Halloween ezinganeni ezingazikhombisa kancane kancane okushiwo yileli phathi nokuthi likhuluma ngani uma lisencane kakhulu. Bazoba nokuzijabulisa okuningi!
Ngokuqondisa kwakho ungabasiza balungiselele lokhu kumnandi I-Halloween inamathela esimweni sezilo. Uzodinga kuphela izinti ezithile ze-popsicle, omaka abanemibala, amehlo ahambayo, izikele, iglu, iteyipu nentambo emhlophe. Ungabona ukuthi kwenziwa kanjani igxathu negxathu kokuthunyelwe Izintandokazi ezihle ze-lolly ze-Halloween.
Umama wamakhadibhodi amnyama we-Halloween
Izidumbu zingomunye wabalingiswa bakudala be-Halloween ukugqoka nokwenza ubuciko. Uma kulawa maqembu ufuna ukwenza kabusha nabancane bonke abalingiswa be-Halloween, lokhu amakhadibhodi amnyama mummy ngeke ilahleke ohlwini lwakho.
Futhi kungenye yezinto ezilula kakhulu ze-Halloween izingane ezizokwenza! Izingane zizodinga kuphela iphepha lokwakha elimnyama, amehlo obuciko, uboya obumhlophe ukwenza amabhandeshi, iglu, itheyiphu, ipensela nezikele. Eziningi zazo izingane zigcina emacaleni azo ezikole, ngakho-ke zizoba nazo zisondele.
Izinyathelo zokwenza lo mama zilula kakhulu. Thola imiyalo yale manuwali, eposini Umama wamakhadibhodi amnyama we-Halloween.
Ubuciko be-Halloween bezingane. Umdwebo womthakathi
IHalloween futhi yisikhathi esihle sokuthi izingane zithuthukise ubuciko bazo zenze imidwebo noma ubuciko ukuhlobisa indlu, iphathi noma ikilasi lazo esikoleni ngale ndaba.
Kuthiwani ngokwenza ifayili le- ukudweba umthakathi omncane ukuba nesikhathi esimnandi? Ngezinto ezimbalwa onazo ekhaya nesifanekiso ozosithola kokuthunyelwe Ubuciko be-Halloween bezingane. Umdwebo womthakathi Ngokuqinisekile abancane bazokwazi ukwenza umdwebo omuhle wokuqala abazothanda ukuwubonisa wonke umuntu?
Ngeke kukuthathe isikhathi eside ukukwenza futhi kokuthunyelwe uzothola ividiyo enemiyalo. Ngaphezu kwalokho, kungenziwa ngezifiso ngokudweba uhlamvu lwe-Halloween oluthanda kakhulu: isipoki, i-vampire, i-werewolf, njll.
Ungayenza kanjani uswidi we-Halloween omile ghost
Lokhu kungenye yezandla ze-Halloween zezingane ezizothanda kakhulu yilezi uswidi omise okomoya. Kulula ukuzilungiselela futhi ziyasiza ukuhlobisa itafula uma unikeza iphathi yezingane ze-Halloween ukuze izingane zijabule. Bangakusiza uzilungiselele!
Uzodinga kuphela izinto ezilandelayo: ama-lollipops, umaka omnyama, iteyipu yentambo ewolintshi neyomnyama, amashidi amhlophe nezikele. Ku-jiffy uzoba nezipoki ezithile ezinhle ukumangaza zonke izivakashi.
Eposini Ungayenza kanjani uswidi we-Halloween omile ghost uzothola zonke izinyathelo zokuzenza.
Ungayenza kanjani ikati elimnyama le-Halloween
Awungeke uphuthelwe okuhle ikati elimnyama ukuhlobisa indlu yakho le Halloween. Izingane zizothanda ukwenza lo msebenzi! Uzodinga amashubhu amakhadibhodi, isikelo, upende omnyama, amakhadibhodi amnyama namhlophe, i-glue, nomaka.
Inqubo ilula kakhulu. Kungakho kungenye yezandla ze-Halloween zezingane engincoma ukuthi uzenze ngayo. Uzodinga kuphela kusasa okuncane ukuhlanganisa izingcezu bese uzipende. Uyabona ukuthi kwenziwa kanjani kokuthunyelwe Ikati elimnyama le-Halloween.
I-Halloween garland yokwenza nezingane
Ngabe uhlela ukuphonsa iphathi yezingane ze-Halloween kulo nyaka futhi ufuna ukumangaza izivakashi ngokwenza imihlobiso eminingi ngesandla? Ngakho-ke kufanele ukubheke lokhu I-Halloween garland yokwenza nezingane.
Igqamile futhi kulula kakhulu ukuyenza! Ngaphezu kwalokho, izingane zizokujabulela ukukwazi ukuhlanganyela ukukusiza ukwenze, yingakho ingenye yezandla ze-Halloween zezingane engincoma ukuthi uzilungiselele kanye nazo.
Ukulungisa le garlandi emnandi uzodinga izinto ezithile ezifana namakhadibhodi amnyama nawolintshi, irabha, intambo emhlophe, itheyiphu, amapensela nezikele. Uma ufuna ukubona izinyathelo zokukwenza, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe I-Halloween garland yokwenza nezingane.
Amabhukumaka wenjoloba womthakathi we-Halloween
Uma abancane bethanda ukufunda, impela ngeHalloween bazobe sebelungiselele izindaba eziningi nezindaba ezethusayo abazokufunda. Ukukhumbula ukuthi yiliphi ikhasi ebebefunda kulo, akukho okungcono kunokuthola usizo lokubekisa. Kunganjani sithathe ithuba lokuphakamisa ukwenza a ibhukhimakhi lomumo womthakathi? Ungomunye wemisebenzi yezandla ehlekisa kakhulu ye-Halloween yezingane. Bazokwazi ukunikeza ukuthinta ukwesaba kuzo zonke izincwadi zakho! Futhi, njengesipho se-Halloween kungumqondo omuhle.
Ukulungisa le bhukumaka uzodinga lezi zinto: u-Eva irabha, iglu, induku yokhuni, isikele, amehlo ahambayo nentambo, phakathi kokunye. Uma ufuna ukuthola konke okunye okusetshenzisiwe nokuthi kwenziwa kanjani, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Amabhukumaka wenjoloba womthakathi we-Halloween.
Izingebhezi zaseMexico ukugubha uSuku Lwabafileyo noma i-Halloween
Umhlobiso odume kakhulu osanda kusabalala emhlabeni wonke ukugubha i-Halloween emhlabeni jikelele yiwona odumile usuku lwamaMexico lwezingulube ezifile. Zisetshenziselwa ukuhlobisa amakamelo ahlukene endawo futhi nasemhlabeni we-confectionery. Zihlukahlukene kakhulu!
Uma uthanda izingebhezi zaseMexico, ngazo ezincane zingathuthukisa bonke ubuhlakani bazo lapho zibakha ngoba kunezindlela eziningi zokuzihlobisa. Eposini Izingebhezi zaseMexico ukugubha uSuku Lwabafileyo noma i-Halloween Uzothola yonke imiyalo yokwenza omunye wemiklamo ye-Halloween enhle kakhulu yezingane.
Uzodinga kuphela i-cd noma ikhampasi, iraba elinamagwebu anemibala, isikele, iglu, omaka abakhona unomphela nezibhakela zegwebu.
I-DIY Halloween bat
Kumsebenzi olandelayo ngeke udinge ngaphezu kwemizuzu engu-5 futhi ungakwenza ngezinyathelo ezintathu nje. Lokhu kumnandi isiqeshana esimise ilulwane ekahle ukuyilengisa emakhethini endlu futhi uyinikeze okwesabekayo kula maphathi. Ngenye yezinto ezilula kakhulu ze-Halloween zezingane ozothola.
Uzodinga kuphela udlawana wokhuni, upende namakhadibhodi amnyama, amehlo ahambayo, iglu, ipensela, isikele, amabhulashi namashidi. Uyabona ukuthi kwenziwa kanjani kokuthunyelwe I-DIY Halloween bat.
Izipoki zephepha ukuhlobisa iphathi yakho ye-Halloween
I-Los fantasmas Zingezinye zezinhlamvu zakudala ezingaphuthelwa kunoma yiliphi iphathi elinetimu le-Halloween. Zikhona yonke indawo! Ubuciko obulandelayo ukuhambisana okuhle ukuhlobisa amakhethini namashalofu ekhaya noma ekilasini lesikole kanye neziqeshana ezimise amalulwane.
Lokhu kungenye yezandla ze-Halloween zezingane ongeke uzidinge izinto eziyinkimbinkimbi kakhulu. Ngokuphambene nalokho, yizinto eziyisisekelo ozoba nazo ekhaya: amashidi amhlophe, isikele, ipensela, umaka omnyama onomphela kanye neglue. Uma ufuna ukubona igxathu negxathu lokuthi lenziwa kanjani, ungaphuthelwa okuthunyelwe Izipoki zephepha ukuhlobisa iphathi yakho ye-Halloween.
Ikhadi lezingane lezilo ukugubha i-Halloween
Kungaba ukuhalalisela iphathi noma ukumema izingane kokunye, ubuciko obulandelayo buzoba wusizo olukhulu. Ingabe i- ikhadi lezingane lezilo ukugubha i-Halloween.
Ukuze ukwenze uzodinga izitembu ze-monster yize ungenazo ungalanda isifanekiso ozosithola kokuthunyelwe kwangempela. Zonke ezinye izinto ozozidinga yilezi: amakhadibhodi, omaka namapensela anemibala, iglu, isikele kanye nenjoloba ye-eva empunga. Lokhu kungenye yezinto zobumnandi nezimibalabala ze-Halloween zezingane okufanele zenziwe!
Uma ufuna ukubona yonke inqubo yokwenza lobu buciko, ngikweluleka ukuthi ufunde okuthunyelwe Ikhadi lezingane lezilo ukugubha i-Halloween.
Ama-coasters wamehlo anegazi ukuhlobisa i-Halloween
Ngokusebenzisa ingqikithi ye-Halloween ungazilungiselela ama-coasters amakhulu wangempela ukuhlobisa indlu yakho noma iphathi. Zingathulwa ngezitayela ezahlukahlukene kepha lena enamehlo anegazi ilungele lo mcimbi! Awucabangi?
Izinto ozozidinga kulo msebenzi wobuciko yiCD, iraba elinamagwebu anemibala, isikele, iglu, amakhadibhodi nomaka. Ungabona ukuthi kwenziwa kanjani ngokuchofoza kokuthunyelwe Ama-coasters anamehlo egazi ukuhlobisa i-Halloween.
Iphosta «BOO» ye-Halloween
El iphosta «BOO» ye-Halloween Ungomunye wemisebenzi yezandla epholile kunazo zonke yase-Halloween yezingane izingane ezingahlobisa amakamelo azo ngayo endlini. Ungayilengisa emnyango ukuze wethuse noma ngubani ofonayo, kwamanye amakhethini noma eshalofini. Kuphi futhi lapho uthanda khona!
Izinto ezisemqoka ozozidinga ukwenza lobu buciko amakhadibhodi, upende we-acrylic, iteyipu, izintambo, amabhulashi nezinye izinto ongazithola kokuthunyelwe Iphosta «BOO» ye-Halloween eceleni kwemiyalo yokwakha ubuciko.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Izikhathi ezikhethekile » Ubuciko be-Halloween » 15 Halloween yezandla for Kids
Halloween yezandla mayelana nabathakathi
5 yezandla amakhadibhodi ukwenza nezingane on Halloween